Iikhabhathi zeBhere Creek #2
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguShelly
UShelly ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Ikhabhathi epholileyo ebekwe kwilizwe elikufutshane neBear Creek Wines kunye nefama yethu yobuqu. Ifakwe entliziyweni yehlathi leSizwe lase-Allegheny kunye neyona ndawo ibalaseleyo yohambo lwakho lwangaphandle okanye ukubaleka ngempelaveki. Umgama nje omfutshane ukuya kwiindawo ezininzi ezinomtsalane zasekhaya ukubandakanya: iBrush Hollow Hiking/Ski Trail, Marienville ATV Trail, Ridgway Rifle Club, Clarion River (Pennsylvania River of the Year), Benezette Elk Viewing Area, Kinzua Dam/State Park, Cook I-Forest State Park, kunye nezinye ezininzi!
Le ndlu yipropathi esanda kulungiswa ebonisa isilingi eveziweyo kwindawo yokuhlala ephambili, ikhitshi esebenza ngokupheleleyo enegumbi lokutyela, kunye namagumbi okulala amabini aneebhedi ezimbini zokumkanikazi kwigumbi ngalinye. Ipropathi engaphandle ibanzi enendawo yomlilo kunye ne-grate yokupheka, kunye neveranda yangaphambili kunye nomgangatho ongasemva ukonwabela ixesha langaphandle.
Le khabhinethi intle imida yeAllegheny National Forest kwakunye nefama yethu yobuqu. Kukho indawo eninzi evulekileyo kunye nomoya omtsha!
Le ndawo isemaphandleni - unokufumana umbono wezilwanyana zasendle ezifana nempungutye, iinkuni, i-skunks, kunye nebhere mhlawumbi (nangona oku kunqabile)! Ngokubanzi izilwanyana zasendle ziya kukoyika, kodwa nceda uqaphele ukuba usenokubona nayiphi na kwezi njengoko zidlula!
Ifakwe kufutshane neBear Creek Wines enokufikelela ngaphandle kweAllegheny National Forest. Isetingi yelizwe elizolileyo eneendawo ezininzi ezinomtsalane ezikufutshane. Uhambo olufutshane ukuya kwindawo yokujonga i-Benezette Elk, i-Kinzua State Park, i-Kinzua Dam, indawo yokuzonwabisa yase-Twin Lakes, i-Bendigo State Park, i-Cook Forest State Park, kunye nabanye abaninzi. UMlambo iClarion (uMlambo wasePennsylvania woNyaka) kukuhambo olufutshane lokuloba okugqwesileyo kunye ne-kayak / ukukhwela amaphenyane.
I-firepit engaphandle iyafumaneka. Iinkuni zinokuthengwa kwihostele ukuba uyafunwa.
Kukho ishishini lasekhaya elirenta iimoto ezikwi-All-terrain ngexesha lonyaka lokukhwela i-ATV kwi-Allegheny National Forest. Kukho iindlela ezininzi zokuhamba kunye nokunqumla ilizwe lokutyibiliza kumgama omfutshane wekhabhinethi. Kwaye ukuba uMama weNdalo uyanceda, iindlela zokuhamba zekhephu nazo zikufuphi.
Ndifumaneka ngetekisi, i-imeyile okanye umnxeba njengoko kufuneka kwaye ndiya kuphendula ngokukhawuleza.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kane